सरकारी अस्पतालको आइसीयु किन सर्वधारणको पहुँच बाहिर ?
सर्वसाधारणको उपचारका लागि सरकारी अस्पतालमा सघन उपचार कक्ष (आईसीयू) पाउन कठिन हुन थालेको छ। जनशक्तिको अभाव हुँदा सरकारी अस्पतालमा कम आईसीयू सञ्चालन भइरहेको र ती आईसीयूमा पनि प्रभावशालीको पहुँच हुँदा सर्वसाधारणले कठिनाइ भोग्नुपरेको हो। केही दिनअघि धादिङ सुनौलो बजारकी लक्ष्मी रोकाले ११ महिने छोरा सुनीललाई निमोनिया भएपछि कान्ति बाल अस्पताल पुर्‍याइन्। सुनीलको प्रारम्भिक उपचार गरेपछि चिकित्सकले छोरालाई आईसीयूमा राख्न सिफारिस गरे तर कान्तिमा आईसीयू उपलब्ध थिएन। रोकासँग छोरालाई निजी अस्पतालमा लैजाने गरी उपचार खर्चको अभाव थियो। धादिङबाट सात हजार रुपियाँ लिएर छोराको उपचारका लागि कान्ति बाल अस्पताल आएकी ...
अस्पतालमा सुत्केरी भुइँमा उपचार गराउन बाध्य
भरतपुर अस्पतालमा प्रसूतिका लागि आउने बिरामीमध्ये झण्डै आधा भुइँमा नै सुतेर प्रसूति गराउन बाध्य छन् । अस्पतालका प्रसूति रोग विभाग प्रमुख डा सुनिलमणि पोख्रेल अस्पतालमा प्रसूति गराउन आउने आधाआधि महिला भूइँमा सुतेर उपचार गर्न बाध्य भएको बताउनुहुन्छ । दैनिक सरदर ४० जना भूइँमा नै हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो । भरतपुर महानगरपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुख दुवै महिला छन् । महानगरमा प्रमुख र उपप्रमुखको शपथपछिको ३२ आँैं दिनका दिन आज दोस्रो पटक भरतपुर अस्पताल पुग्नुभएका उहाँहरुले प्रसूति गृहको निरीक्षण गर्नुभएको थियो । प्रमुख रेणु दाहाल र उपप्रमुख पार्वती शाह ...
अहिले युवाहरुमा सुगठित शरीरप्रति बिछट्टैको मोह छ । खासगरी सिक्स प्याक एब्स । सिक्स प्याक एब्स बनाउनका लागि लागि कुनै निश्चित समय भने लाग्दैन । यसमा व्यक्तिको शारीरिक बनौट, ताकत र मिहेनतमा भर पर्छ । नियमित जिम जाने, उचित डाइट चार्ट फलो गर्ने हो भने सिक्स प्याक एब्स पाउन सकिन्छ । यद्यपी यसअघि केहि कुरामा भने ख्याल गर्नैपर्छ । क्रन्च एक्सरसाइज क्रन्च एक्सरसाइज आफैमा सजिलो एक्सरसाइज हो । सिक्स प्याक एब्स बनाउनका लागि यो एक्सरसाइज सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिन्छ । क्रन्च एक्सरसाइज गर्नका लागि भुईमा सुतेर सासलाई भित्रतिर तान्दै शरीरको ...
हृदयघातका कारणहरू दुई प्रकारका छन्- उल्टाउन सकिने र नसकिने । ४० वर्ष पछिको उमेर, पुरुष लैङ्गकिता र हृदय रोगको पारिवारिक इतिहास, जसलाई उल्ट्याउन नसकिने भनिन्छ । रगतमा उच्च कोलेस्टेरोल, उच्च ट्राइग्लिसराइड, उच्च एल.डि.एल कोलेस्टेरोल, उच्च नन् एच.डि.एल वा भि.एल.डि.एल कोलेस्टेरोल, निम्न एचडिएल कोलेस्टेरोल , उच्च रक्तचाप, मधुमेह, धुम्रपान, मद्यपान, निस्क्रिय जीवनशैली, मोटोपन, पोषणयुक्त खानाको अभाव अदिलाई उल्टाउन सकिने कारण मानिन्छ । उल्ट्याउन नसकिने कारणहरुः १) उमेर उमेर बृद्धिसँगै हृदयघातको जोखिम पनि बढ्छ । ४० वर्ष पछि उमेर सँगै ब्याक्तिको नशामा डीजेनेरेसनको प्रकृया बढ्ने हुँदा हृदयघात चाँडै हुन ...
अहिले बजारमा थरीथरीका साबुन छन् । कुन साबुनले नुहाउने ? यसको खास हेक्का गर्दैनौ । हेर्दा राम्रो साबुन छनौट गर्छौं । कतिले सस्तो खोज्छन्, कसैले महंगो । कोहि साबुनको ब्रान्ड हेर्छन्, कोहि त्यसको आवरण । वास्तवमा सावुन धेरै रंग, फ्लेवरको हुन्छ । यसरी सावुनमा विविधता हुनु भनेको त्यसको प्रकृति पनि फरक हुनु हो । अर्थात कुन किसिमको छालामा कस्तो साबुन प्रयोग गर्ने भन्ने हुन्छ । त्यसैले साबुन प्रयोग गर्नुअघि आफ्नो छालाको प्रकृति अनुसार छनौट गर्नुपर्छ । अन्यथा त्यसको गलत असर पनि पर्न सक्छ । छालाको प्रकृति अनुसार ...
दसैँ नजिकिँदै छ । बजारमा ड्रेस किन्नेको भिडभाड बढ्दै छ । बजार घुम्दा डमीलाई लगाएका सोपिस सबै राम्रो भएजस्तो देखिन्छ र किन्न मन लाग्छ । बजारमा अरू कसैले लगाउँदा सुहाएको लुगामा पनि मन आकर्षित हुन्छ । आफूलाई पनि सुहाउला भनेर किन्ने गरिन्छ । तर, फेसन डिजाइनरहरू भन्छन्– यस्तो लहडमा कहिल्यै ड्रेस किन्नु हुँदैन । बजेट र क्वालिटीबाहेक सुहाउने सन्दर्भमा ड्रेसबारे सबैभन्दा सोच्नुपर्ने कुरा हो– रङ । फेसन डिजाइनर नवीना महर्जनले गोरो, कालो र गहुँगोरो वर्णका व्यक्तिले कस्तो रङको ड्रेस रोज्ने र कस्तो नरोज्ने भन्नेबारे टिप्स ...
भाइरल ज्वरोको संक्रमणले थलिएपछि त्रिवेणी नलगाड ११ का नरबहादुर ध्यार गाउँनजिकै चौखामा रहेको एक मेडिकलमा गए । औषधि किनेर खाएपछि उनी निको भए तर नजिकै रहेको स्वास्थ्यचौकीमा गएनन् । उनी भन्छन्, ‘सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको औषधिले कामै गर्दैन । निजीको औषधिले केही समयमै काम गरिहाल्छ । केही समयअघि छोरी बिरामी भएकी थिई । स्वास्थ्यचौकी गएर औषधि ल्याए । छोरीलाई खुवाए तर बिसेक भएन । फेरि मेडिकलबाट ल्याएको औषधि खुवाएपछि निको भयो । त्रिवेणीनलगाड १२ का परिमले कामी पनि घरका परिवार बिरामी हुनेबित्तिकै निजी मेडिकल जाने गर्छन् ...
उनी दिनहुँ गाजल लगाउँछिन् । कतिसम्म भने, झन्डैझन्डै कञ्चटसम्मै तान्ने गर्छिन्, गाजलको धर्को । उनले यसो गर्नुको विशेष कारण छ । अनुहारको त्यो भागमा उनको छाला सेतो छ र उनी त्यही ‘स्पट’ लाई लुकाउन खोज्छिन् सधैँ । बोलचालको भाषामा दुबी/चरकसमेत भनिने ल्युकोडर्मा, भिटिलिगोबाट पीडित भएका कारण उनी गाजल लगाउँदै सधैँ बढी नै सचेत हुने गर्छिन् । एक समय यस्तै थियो, दुबीको उपचार थिएन । भए पनि हाम्रो मुलुकमा सुलभ थिएन । समय अहिले त्यस्तै छैन र गाजलको भर परिरहनुपर्दैन । दुबीलाई अब सामान्य उपचारबाटै निको पार्न ...
१५ मिनेट छुट्याउनुस् किड्नीको पत्थरीबाट बचिन्छ
परिवर्तनशील लाइफस्टाइल र गलत आहारविहारका कारण किड्नीको पत्थरीका बिरामी बढ्दै गएका छन् । तर, अब आत्तिनु पर्दैन । मात्रै १५ मिनेट छुट्याउनुहोस्, किड्नीमा हुने पत्थरीबाट जोगिन सकिन्छ । बिहान अथवा साँझ योगासन गर्दा यस्तो समस्याबाट बच्न सकिने चिकित्सकहरूले बताएका छन् । यो योगासनले किड्नीलाई असल राख्नुका साथै सधैँ स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ । योगले किड्नी स्टोनबाट कसरी बचाउँछ त ? योग इन्स्ट्रक्टर रत्नेश पाण्डे यसो भन्छन् : पेट तल पार्नुहोस् । तपाईंको कम्मर जमिनमा टेकाउनुहोस् । यसको सहारामा तपाईंको बडीलाई माथि उठाउनुहोस् । यो प्रक्रिया कम्तीमा ...
गर्मीमा कस्तो मेकअप गर्ने ?
गर्मी मौसममा मेकअप गर्दा ध्यान दिनुपर्छ । गर्मीमा ज्यादै पसिना आउने भएकाले मेकअप जोगाउन गाह्रो हुन्छ । त्यसैले महत्वपूर्ण कुरामा ध्यान दिए तपाईंले गरेको मेकअप टिकिराख्न सक्छ । गर्मी मौसममा हल्का मेकअप गरेकै राम्रो हुन्छ । गर्मी याममा शरीरसुहाउँदो पहिरन र मेकअप गर्नुपर्छ । हामीले सुन्दर देखिन ‘मेकअप’ र ‘ड्रेसअप’ गर्नुपर्छ । गर्मी मौसम भएकाले सबै मेकअप सामान वाटरफ्रुफ प्रयोग गर्नुपर्छ । दिनभर हिँड्दा गर्मीले मेकअप बिग्रन सक्छ । त्यसैले मेकअप वाटरप्रुफ गर्दा राम्रो हुन्छ । बजारमा वाटरप्रुफ फाउन्डेसन, मस्कारा, लिपस्टिक, आइस्याडो आदि पाइन्छ । त्यसैले वाटरप्रुफ ...
डन्डिफोरबाट कसरी बच्ने ?
धेरैलाई पिरोलेको छ, डन्डिफोरले । डन्डिफोर आएपछि अनुहार कुरूप बन्छ । धेरै उपचार गर्दा पनि निको नहुँदा डन्डिफोरबाट पीडित अत्तालिएका छन् । त्यसो भए के गर्ने ? डन्डिफोरलाई चिमोट्ने, निचोर्ने गर्नु हुँदैन । केही टिप्स पढ्नुहोस्, जसले डन्डिफोर आउने समस्यालाई रोक्न सक्छ । अनुहार सधैँ सफा गर्ने र सुक्खा राख्ने । अत्यधिक चिल्लो र जथाभावी रूपमा कस्मेटिक प्रयोग नगर्ने । चुरोट, मादक पदार्थ र अत्यधिक चिल्लो खानालाई सधैँ नियन्त्रण गर्ने । पौष्टिक आहारमा जोड दिने । सफा र पर्याप्त पानी पिउने ।
यस्तो अवस्थामा भुलेर पनि खानुहुन्न केरा
केरा स्वास्थ्यका लागि निकै लाभदायक फलफूल मानिन्छ । यसमा पोसेसियम, म्याग्नेसियम, भिटामिन बी–६ लगायत हुन्छ । तर, केही यस्तो अवस्थामा केरा खानुहुँदैन, जसले ठूलो समस्या निम्त्याउन सक्छ : -केरामा बढी मात्रामा सुगर, कार्बोहाइड्रेड, क्यालोरी पाइन्छ । यसले गर्दा शरीरमा मोटोपन बढ्न सक्छ । -केरामा पोटासियम बढी मात्रामा हुन्छ । यसले गर्दा असामान्य रूपमा मुटुको धड्कन बढ्न सक्छ । यसले एन्जाइटीजस्तो समस्या पनि निम्त्याउन सक्छ । याद गर्नुहोस्, मानिसमा एन्जाइटी भयो भने निद्रा नलाग्ने, डर लाग्ने आदि लक्षण देखिन्छ । -केरामा पाइने थायमिन नामक तत्वले माइग्रेन र टाउको दुख्ने ...
गुल्मीको एक विद्यालयमा भाइरल ज्वरोले गर्दा दुई दिन विद्यालय बन्द गर्नुपरेको छ । मुसिकोट नगरपालिका–५ स्थित आँपचौरमा रहेको नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयमा भाइरल ज्वरोले गर्दा विद्यालयका अधिकांश शिक्षक र विद्यालयका करिब आधा विद्यार्थी भाइरल ज्वरोले बिरामी भएपछि बुधबार र बिहीबार अर्थात् हिजोसम्म दुई दिनका लागि विद्यालय बन्द गरिएको विद्यालयका शिक्षक सुनिल भण्डारीले जानकारी दिए । विद्यार्थीमा शुरुमा टाउको दुख्ने, ज्वरो आउने, रिङ्गटा लाग्ने लगायतका समस्या देखापरेको बताइएको छ । एकहजार पाँचसयको स्वास्थ्य परीक्षण यसैबीच, गुल्मीमा सञ्चालन भएको तीनदिने स्वास्थ्य शिविर अन्तर्गतको दोस्रो दिनसम्म झण्डै एक हजार ५०० जनाको स्वास्थ्य ...
भदौ २३ । घरमै सुत्केरी हुने पुरानो परम्परालाई छोड्दै बैतडीको ग्रामीण भेगका महिला पनि सुत्केरी हुन स्वास्थ्य संस्थामा जान थालेका छन् । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले बैतडीलाई पूर्ण संस्थागत सुत्केरी जिल्ला घोषणा गर्ने लक्ष्य लिएपछि स्वास्थ्य संस्थामा आएर सुत्केरी हुनेको संख्या बढ्दै गएको हो । विगत ३ बर्षको तथ्याङ्कलाई हेर्दा स्वास्थ्य संस्थामा गएर सुत्केरी हुने महिलाको संख्या बढ्दै गएको छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बैतडीका पब्लिक हेल्थ नर्स ममता जोशीका अनुसार आर्थिक बर्ष २०७१/७२ बैतडीमा कुल गर्भवतीमध्ये ५७ प्रतिशत महिला स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी भएका छन् भने आर्थिक बर्ष ...
नवजात शिशुलाई कसरी नुहाइदिने ? यस्तो छ विधी
चिकित्सकका अनुसार भर्खर जन्मेका शिशुलाई कम्तीमा पनि सातामा तीन पटक नुहाइदिनु पर्छ । त्यसबाहेक प्रत्येक दिन शिशुको मुख, हात खुट्टा तथा गुप्ताङ्ग सफा गरिदिनुपर्छ, ताकि कुनै किसिमको संक्रमण हुन नपाओस् । बच्चालाई नुहाउनु सामान्य काम होइन । बच्चाको छाला संवेदनसिल हुने भएकाले मनतातो पानी आवश्यक हुन्छ । चिसो वा अलि तातो पानीले उनीहरुलाई असर गर्छ । साथै लामो समय लगाएर पनि नुहाइदिनु हुन्न । निश्चित समयभित्र नुहाइसक्नु पर्छ । नुहाउँदा प्रयोग गर्ने साबुन बालमैत्री हुनुपर्छ, अर्थात बच्चाकै लागि तयार गरिदिएको साबुन प्रयोग गर्नुपर्छ । नुहाउने ...
त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्ले काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वीकृतिविनै अस्पताल चलेकोबारे पूर्ण जानकार परिषद्का पदाधिकारी कारबाहीको भागिदार हुने डरले कलेजको सम्बन्धन खारेजीको निर्णयमा पुगेका हुन्। सर्वोच्च अदालतको आदेशको आधारमा नियमपूर्वक कलेजलाई सम्बन्धन दिएको दाबी गर्दै आएका पदाधिकारी अनुगमनदेखि प्रतिवेदन तयारीसम्मको काम बुधबार एकैदिनमा सक्दै नाटकीय निर्णयमा पुगेका छन्। ‘कलेज सञ्चालकसँगको मिलेमतोमा फर्जी प्रतिवेदन देखाएर उनीहरूले कलेजलाई सम्बन्धन दिएका थिए। उनीहरूले सम्बन्धनको अर्को कारणमा देखाएको सर्वोच्चको आदेश पनि पुरानो थियो', त्रिवि स्रोत भन्छ, ‘उनीहरूको अवैध निर्णय बाहिर आएपछि जनस्तरबाटै कलेजको सम्बन्धनमा ...